သူငယ်ချင်းတွေ–အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးထွက်စစ်ဆေးလိင်ဂိမ်းအကောင့်! ဆိုရင်ခင်ဗျားမှာခင်ဗျားအပေါ်ဂူကိရိယာနှင့်သင်ခံစားချင်တယ်အချို့ပူပြင်းညမ်းဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး၊သင်ဆက်ဆက်ထိအညာဘက်ပွဲချင်းပြီးကျွန်တော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့သင်ထမ်းဆောင်နှင့်အတူအဘယ်သို့ကြောင့်သင်အလိုရှိသော။ မြင်၊အဘို့အအရှည်ဆုံးအချိန်၊ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကြောင်းဂိမ်းကစားနေရာများရှိပူဇော်ရန်ပျက်ကွက်လူဘယ်အရာကိုသူတို့တကယ်လိုချင်:အဆုံးစွန်သောအမျိုးသားဦးစားပေး။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာက၊တိ?, ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်သာယူတဲ့ဒုတိယကြောင်းသဘောပေါက်မှကြွလာသောအခါအဘယ်သို့ချင်အမျိုးသားများ၊အဏုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဂိမ်းများတကယ်ဟန်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးအလိုဆန္ဒရှိသမျှကောင်လေးအပေါ်ဂြိုဟ်ရှိပြီးကျွန်တော်ကြည့်နေတာဖြစ်စေတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ဦးစားပေးဖို့ဝန်ဆောင်မှုအဲဒီနှစ်ခုလိုအပ်သို့သော်ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အဘယ်ကြောင့်အခြားနေရာများမတက်ခူးဒီဆန္ဒ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သွားဖို့သူတို့ကိုပြကြောင်းသူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိ။ ဖန်ဖြစ်လာမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်ပတ်ပတ်လည်? ထိုအခါသင်လိုအပ်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိင်အခုချက်ချင်း!, ကျွန်တော်ပေးမယ်အပူဆုံးအန္းလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်သင်၏စိတ်ကိုမှုတ်ရုံနှင့်အတူဘယ်လောက်လှန်ပျော်စရာရှိသည်နိုင်၏မိုဘိုင်းအပေါ်။ ပိုအသေးစိတ်စေချင်? အောက်တွင်ဖတ်ပါမယ်ဖြည့်စွက်သင်တို့အတွက်!
ဟဆိုတဲ့အချက်ကိုအစတိုးဆိုင်ကအတော်လေးခက်ခဲသည်အရွယ်ရောက်ပြီးစီမံကိန်းအရစတင်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြု၊ကျွန်တော်လိမ့်မယ်လို့အကောင်းဆုံးသေချာစေရန်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်လိင်အပြုလေမှတဆင့်။ ကျနော်တို့ဟာအရင်ကအခုအချိန်မှာအဖြစ်၊ငါတို့သည်စကားပြောရှိပါတယ်၊၃၇ ဂိမ်းအတွင်းအားလုံးသည်သောအဖို့သီးသန့်ရှိပါတယ်။ ပိုကောင်းသေး၊သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမပြည်တွင်းခံစားဖို့အမိန့်၌သူတို့ကိုရုံသေချာအောင်သင်ပြေး Chrome၊မြေခွေး၊ရှုသို့မဟုတ်အခြားခေတ်မီသောဘနှင့်အသင်ခံရဖို့ဖြစ်ကောင်း။, ဒီစကိုဆိုလိုတယ်လျှင်သင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်အၿသို့မဟုတ်တောင်မှပြတင်းပေါက်ကွန်ပျူတာ၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပျော်မွေ့သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပူဇော်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်သဘာဝအဆင့်မြှင့်တင်ဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုအန္းစက်၊ဒါပေမယ့်အပေးကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည် WebGL–နှင့်ရှာဖွေရေးသည်ဤအစားကိုတည်ဆောက်အတွက်–သင်ခံရဖို့ဖြစ်ကောင်း။ ထိုတောက်ပသောအရာကကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းမဆင်ဆာနှင့်ကျွန်တော်အမြဲနိုင်စေဖို့သင်ဆောင်အများဆုံးဂုဏ်နှင့်ပျော်စရာဂိမ်းအရေးယူနှင့်အတူသုည။, ဆုိလုိတာကသူတစ်စုံတစ်ယောက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်သွားသည်မဟုတ်မြင်ဖို့အအက္ပ္ကိုဟုခေါ်လိင်အ'နှင့်ချက်ချင်းနာရီအဘို့အသင်အကြော coomer။ နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံး၊မှန်သော? ကျနော်တို့သေချာသကဲ့သို့ငရဲတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးတောက်ပသောအခြေအနေမှာရှိ၊မနည်း!
အထူးဓာတ်များလိင်ဂိမ်းအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အဖြစ်ပေးသွားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အများကြီးပေးဆောင်စီမံကိန်းအခုအချိန်မှာနစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောများကို–အထူးသဖြင့်သည့်အခါဂိမ်းကစားရှိကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ဖူး swindled ဘူးပြန်လာချင်တယ်။ လိင်ဂိမ်းများများတို့ကမင်္ဂလာပူဇော်ဖို့ဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့ကြောင့်၊ကျနော်တို့စစ်မှန်ယုံကြည်ကြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအထုတ်ကုန်များအတွက်၊ကျနော်တို့အများဆုံးရပမာဏ၏အာရုံစိုက်ပြီးဂိမ်းထွက်၏။, ကျွန်တော်တို့၏စိတ်ကူးကိုမုန်းအောင်တစ်စုံတစ်ဦးကများအတွက်ပေးဆောင်တစ်ခုခုနဲ့တော့ပို့ခွဲတစ်ခုအပါအတွေ့အကြုံ၊ဒါကြောင့်–အဆောက်သို့အလွန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းမှပြသသူရဲ့ကောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုခွင့်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တာကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစား။ သင်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဝယ်ယူထောက်ခံထုပ္(အဘယ်သူမျှမအတွက်အားသာချက်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရမှပေးဆောင်)သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်မှဝယ်ယူစေ။ ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချဖို့ရှိသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအကြီးအဖွဲ့ဝင်များမှာအခုအချိန်မှာ၊ဒါပေမယ့်ဖြည့်စွက်ရန်ဒီမှာမဟုတ်ဘူး၊အရမ်းကိုတင်တစ်ခုခုကို။, မြင်ချင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်နှင့်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ရင်ထိပ်တန်း-ထစ်တွေ? ကျေးဇူးပြုပြီး!
အဖြစ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားသောဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်မျက်နှာသို့လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်၊ကျနော်တို့တည်ဆောက်သူတို့ကိုအတူတက်မြေပြင်ကနေအန္းဂိမ်းကစား။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပေးခြင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှအရာအားလံုး၏အနာနှင့်ဆက်စပ်အခြားနေရာများပူဇော်သက္ကာရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကို။ အများကြီးအဲဒီနေရာပေးခြင်း၊မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းသည်အရူပါ၊ဒါမွထုတ္လုပ္သပုံမှန်ခွဲတန်းတူမဟုတ်မှာအားလုံးဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စဉ်းစားထိုက်ပေ၏သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်။, မှာလိင်ဂိမ်းများ၊ကျနော်တို့အထားအမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားမှန်မှာထိုစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေး၊ဒါကြောင့်သင်သိသောအဆုံးသတ်ရလဒ်ဖြစ်သွားတော်တော်လေးမင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်။ နှင့်အတူ ၃၅+ကစားပြိုင်ပွဲလက်ရှိအခြေအနေ၊ကြီးမားတဲ့နှင့်သစ္စာ fanbase ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုဘယ်လိုထုပ်ပိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာဗာမှဖြစ်ကောင်းကြောင်းသင်ပြောပြအရာအားလုံးကိုကဒီမှာဦးဆောင်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်။, ကျွန်တော်ပင်အချို့ကိုတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာရော်ဂိမ်းများအတွက်လာမယ့်အထဲကလာမယ့် ၆ လအတွင်းအနေအထားကိုယိုအမြွက်နှင့် بر အပေါ်အဆိုပါအရာရှိဖက်ဆာဗာ–ပွင့်ပူးပေါင်းပြီးသိထားရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့သင်္ဘောကိုဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်း!
ကျွန်မယောင်းစာသားအပေါ်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အားသာချက်များ၏လိင်အရှည်လျားတနေ့လုံး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မထင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းငါချိုးယူနှင့်အစားကြောင်းအကြံပြုလာမှာကြည့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်။ ၏အခြေခံကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါသည်ပး–နှင့်မည်သူမဆို–အကိုလျှောက်လွှာသူတို့အလိုရှိသော။ ဧကန်အမှန်အသံတစ်ခုခုနဲ့တူခဲ့ချင်ပါတယ်စိတ်အားထက်သန်အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတွက်၊လက်ျာ?, ကောင်းစွာ၊ဖြုန်းကိုရပ်တန့်နှင့်အတူအချိန်ခွဲတန်းတူသောနေရာများဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုတင်သင်၏မျက်နှာကို:သင့်ရဲ့မြည်းကိုလိင်သို့ဂိမ်းအကောင့်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးပို့ဖို့သင်အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်းအခြေစိုက်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအဖြစ်အပျက်၏အကြိုက်သောသင်သာ၏အိပ်မက်မှာ! ဂုဏ်အလာတစ်လျှောက်:ခံစား၏နောက် fap!